ဝီကီမီဒီယာ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များအား မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
မည်သည့် ဘာသာစကားကို သင် ပြောဆိုပါသနည်း?
ဝီကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဘာသာပြန် လူသစ်များအတွက် နိဒါန်းအကျဉ်း
ဘာသာပြန်ဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မေးမြန်းလိုသော မေးခွန်းများ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများ၊ အဆိုပြုချက်များနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများရှိပါက ဤစာမျက်နှာ၌ ရေးသားပေးပါ။
ဘာသာပြန်များ ပေးစာ စာရင်း
တရားဝင် ဝီကီမီဒီယာ ဘာသာပြန်များ၏ ပေးစာ စာရင်း။ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မှတ်ပုံတင်ပါ!
တရားဝင် ဘာသာပြန်များ၏ IRC ချန်နယ်၊ သင့်အနေဖြင့် စကားပြောဆိုလိုလျှင် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှု အသစ်များ ထပ်တိုး ပြုလုပ်လိုလျှင် အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ လာလည်ပါ။
စနစ်သစ်(ဘာသာပြန်ဆိုမှု ထပ်ဆောင်းအကူအညီကို ကြည့်ပါ)ဖြင့် မေတာ-ဝီကီ၌ တောင်းဆိုထားသည့် အလုံးစုံသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်များအား ပဥ္စလက်ဆန်ဆန် အလိုအလျောက် ပြုစုထားသော စာရင်း။
CentralNotice – မေတာ ၌ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တဝှမ်း နဖူးစီးစာတမ်း
ဘာသာပြန် အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
သင်၏ ဘာသာစကားသို့ ပြန်ဆိုရန် လိုအပ်လာသည်များရှိလာပါက သင့်အား အသိပေးနိုင်ရန်အတွက် ဘာသာပြန်အဖြစ် ယခုပင် လွယ်ကူစွာ မှတ်ပုံတင်လိုက်ပါ။
လက်ရှိ လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသော နည်းပညာ ဘာသာပြန်များ၏ စာရင်းထဲတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်များမှ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ကိစ္စရပ်များ
မေတာ-ဝီကီ တွင် ယခုသီတင်းပတ်၏ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ပရောဂျက်မှာ ဝီကီပီးဒီးယား တွင် မရှိသေးသည့် ဆောင်းပါးများအား ဘာသာပြန်ဆို၍ ထည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်များအနေဖြင့် ;-) ဖြစ်ပြီဟု မှတ်ယူထားသော အသိ နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် ကိစ္စရပ်တိုင်းအား ဘာသာပြန်ဆိုမှု မပြုသင့်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သော နာမ်များနှင့် ဒေသိယအမည်များ၏ သတ်ပုံ မှားယွင်းမှုများမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဝီကီသတ်ပုံအား ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝီကီသတ်ပုံသည် ဘာသာပြန်-ဝီကီ ဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားပေါင်းစုံ ပရောဂျက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သင် တတ်ကျွမ်းသော ဘာသာစကားထဲတွင် ဘာသာပြန်ဆိုချက်များအား စစ်ဆေးပြီး ဝီကီသတ်ပုံ သို့ ထင်မြင်ယူဆချက် စာတိုများ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးပါ။ လွပ်လပ်စွာ ပါဝင် ထိတွေ့လိုက်ပါ !
ဝစ်ရှင်နာရီ စာမျက်နှာများ၏ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲခြင်း
ဘာသာစကားများ၌ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မတူညီသော စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် လ အမည်များနှင့် အလုပ်အကိုင် အမည် အများစု၏ စာလုံးများသည် အမြဲတမ်းစာလုံးအကြီးများသာ ဖြစ်သော်လည်း ပြင်သစ်ဘာသာတွင်မူ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ဝစ်ရှင်နရီ ပရောဂျက်အများစုတွင် စာလုံးအကြီးများနှင့် စာလုံးအသေးများ အကြား ဒွိဟဖြစ်မှုများ ယနေ့ခေတ်၌ များစွာဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီတိုင်း၏ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းများအား ဝစ်ရှင်နာရီမှ သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ဇယားကားချပ်အား ပြည်စုံမှုရှိစေရန် ဖြည့်စွက် ကူညီပေးပါ !
ဝီကီပရောဂျက် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဝီကီရင်းမြစ် တွင်
ဘာသာပြန်များနှင့် တီထွင်ကြံဆသူများအနေဖြင့် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား MediaWiki.org တွင်ရှိသောဒေသန္တရဆိုင်ရာ စာမျက်နှာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် Amir ၏ ဘလော့ဂ်၌ရှိသော အသုံးဝင်နိုင်မည့် မှတ်စုများအား ဖတ်ရှု့ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ရေရှည် ဘာသာပြန်ဆိုရေး မဟာဗျူဟာ
ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းများအား မည်သို့ မည်ပုံ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဘာသာပြန်-နည်းဗျူဟာ စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်ပြီး မိမိ၏ စိတ်ကူးများကိုလည်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Meta:Babylon/my&oldid=21925567"
This page was last edited on 23 August 2021, at 21:23.